Adeegyada Shabakada Semalt
Haddii aad raadineysay saxda ah SEO iyo shirkadda falanqaynta, waxaad u timid meesha saxda ah. In kabadan 636,471 adeegsadeyaal iyo 1,472,583 websayro falanqayn lagu sameeyay, Semalt macaamiisha ku qanacsan dib u eegista si ay u muujiyaan Laakiin akhristayaashayada aan wali fahmin macnaha SEO iyo falanqaynta websaydhadu waa, waa inaad ku dhegaan.
Ku soo dhowow Semalt, oo ah hormuudka SEO iyo websaydhka falanqaynta. Ma nihin shirkad Mickey Mouse oo joogta ah oo ujeedadeedu tahay in lagu baabi'iyo lacagtaada dadaalka badan. Taabadalkeed, waxaan nahay hay'ad digtooni buuxa leh oo buuxa. Waxaad sidoo kale la kulmaysaa kooxdeena khibrad iyo xirfad leh.
Xubnaha kooxdeena ayaa ah khabiir ku xeel dheer arrimaha SEO iyo barta internetka oo had iyo jeer diyaar u ah inay kaqeyb qaataan dhamaan baahiyahaaga. Waa inaad xor u tahay inaad la kulanto oo aad la hadasho. Waxay yihiin dad karti leh, firfircoon oo dhiirigeliya oo leh mashruucyo badan oo IT-ga ah boodhadhkooda. Waa inaad sidoo kale la kulanto turbo, sumadda Semalt, iyo xayawaanka xayawaanka ee loo yaqaan 'turtle xayawaanka'.
Haddii aad wali ka sii yaaban tahay waxa aannu qabanno, halkan waa sharaxaad.
Semalt waxay bixisaa adeegyo websaydh ah oo SEO iyo Analytic ah si ay gacan uga geystaan abuurista iyo hogaaminta macaamiisheenna. Waxaan sii wadnaa falanqaynta websaydhada oo aan hubinno in hogaamimahaas loo rogo macaamiisha. Marka haa, waxaan kaa caawinaynaa inaad lacag sameyso adigoo macaamiisha ku soo jiidan kara meheradahaaga adigoo isticmaalaya internetka.
Suuqgeynta internetka, macaamiisha ka faa iidaystay adeegsiga SEO waxay badanaa ku dhawaaqaan bayaanno sida dhagxan SEO ah !!! Oo halkan waa sababta
Fahmitaanka muhiimadda SEO iyo Falanqaynta Webka
SEO waxay u taagan tahay kobcinta mashiinka raadinta. Tani waa hab dabiici ah oo lagu helo in waxa kujira boggaaga lagu daro Google. Waqtiyo badan, adeegsadayaashu waxay ku xayeysiiyaan ama ku dhajiyaan waxa ku jira internetka iyagoo aan fahmin sida ay u shaqeeyaan. Bal qiyaas meel suuq ah oo ka badan 4 bilyan isticmaale iyo in ka badan 1.5 bilyan oo websaydh. Haa, ma ahan in shabakadahan oo dhan ay bixiyaan adeegyo isku mid ah, laakiin mar labaad midkoodna kama mid aha. Wax kastoo ay tahayba waxaad rabto inaad sameyso, waxaa jira degel kale oo bixiya wax la mid ah. Marka, si loo hubiyo in badeecadaada la aqoonsado, waxaan isticmaalnaa SEO-yada.
Waad ogtahay sida mararka qaar aad ugu socoto Google inaad raadiso badeecad ama mawduuc, laakiin waxaad heleysaa bogag jawaabo ah? Waan hubaa inaad haysato, uma baahnid inaad taas ka jawaabto.
Si kastaba ha noqotee, Google ayaa u habaynaysa natiijooyinkaaga raadinta hab gaar ah. Haddaba, taasi nasiib uma yeelan, waa saamaynta SEO. Inta badan dadka isticmaala internetka maanta waxay ka helaan jawaabta su'aalaha ay ku weydiinayaan shanta natiijooyinka raadinta ee ugu horeeya ee la soo bandhigay. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaaleyaasha internetku ay waligood booqan natiijooyinka kale ee 5-7 ee bogga koowaad. Kadib, ka fikir natiijooyinka raadinta ee bogga labaad, ama kan saddexaad. Weligaa wax ma raadisay oo ma waxaad u martay bogga saddexaad? Tani waxay muujineysaa sida ay muhiimka u tahay waxtarka isticmaalka SEOs.
Markaad tahay milkiile ganacsi ama degel internet, waxaad dooneysaa inaad abuurto taraafikada ugu badan ee suurtogalka ah sababtoo ah gujisyo badan ayaa u badan inay macnaheedu tahay lacag badan (si cad). Marka marka shabakadaada ama adeegyadu ay soo baxaan seddexda natiijadood ee raadinta, waad ogtahay inay tahay heshiis weyn. Taasi waa sababta aad noogu baahan tahay.
Semalt wuxuu kugu meeleeyaa dusha sare ee silsiladda cuntada, adigu marka hore ayaa lagu soo arkaa. Si tan loo sameeyo, waxaan adeegsanaa ereyada furaha iyo falanqaynta ballaaran ee shabakadda. In kasta oo ereyada muhiimka ahi ay yihiin ereyada sixirka ee internetka, wali waxaad ubaahantahay maareyn websaydh adeegsadayaasha si aad u dhajiso, aqriso, ama u dalbato. Arimahani waxay ka caawinayaan Google, iyo makiinadaha kale ee raadinta inay si deg deg ah u helaan waxyaabahaaga marka qof kastoo isticmaala ahi uu baadi goobo wax kasta oo adiga kugu dhaw.
Marka, haddii isticmaale uu raadinayo halka uu ka iibsado kabaha, Google isla markiiba waxay raadisaa ereyga furaha ee websaydhada, laakiin iyada oo aan lahayn degel habboon, adeegsadayaashu kuma dhibi doonaan wax ka iibsashada bartaada.
Waa tan liiska adeegyada ay bixiyaan Semalt
SEO noocan oo kale ah wuxuu dammaanad qaadayaa natiijooyin aad u wanaagsan muddo gaaban. Xirmadan SEO ayaa runtii ah xirmo buuxa oo buuxa oo loogu talagalay ganacsigaaga internetka.
Tani waxay kordhisaa aragtida websaydhkaaga
Waxaad kaheleysaa bogga kobcinta
Waxaan bixinaa dhismo iskuxiran
Daraasad eray fure ah oo balaaran
Warbixinnada falanqaynta shabakadda
Abuuritaanka degel shabakad cabsi leh maahan wax walba oo ay tahay in lagu abuuro taraafikada. Haddii aadan aqoon u laheyn sida loogu kaxeeyo booska ugu sarreeya ee Google, dhib malahan. Qiimaha $ 0.99 kaliya, waxaad bilawdaa olole SEO kaa dhigaya inaad ka faa iideysato. Xitaa sidii bilowga ah ee kobcinta mashiinka raadinta, waxaan ku siinnaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku kobciso boggaaga internetka. Waxaan fursad u siineynaa marin u helida barnaamijkan koofiyadaha cad ee SEO farsamooyinka mashruucyadaada. Ama, waxaad u gaarsiin kartaa macaamiishaada khibradaha wanaagsan ee macaamiisha adigoo siinaya adeegyo SEO ah oo ku saleysan tikniyoolajiyadeena u gaarka ah. U oggolow la-awoodiyeyaasha Auto SEO inay kuu shaqeeyaan oo kuu soo bandhigaan natiijooyin deg-deg ah iyo saameyn 100% ah.
Waa kuma deeqdaas?
Auto SEO waxay faa'iido u yeelan kartaa maamuleyaasha websaydhada, meheradaha yaryar ama bilawga, shirkadaha, iyo iskood u shaqeystayaasha.
Tani waa farsamo SEO ah oo horumarsan oo loogu talagalay guusha ganacsigaaga. Tani waxay kugu gaarsiineysaa dusha sare ee Google.
Xirmadan ayaa leh:
Qoraal ka kooban
Taageero iyo tashi
Hadafka ganacsi kasta waa inuu noqdaa kan ugu fiican. Bal ka fikir in shirkadaadu ka muuqato liiska shirkadaha ugu waaweyn ee Forbes. Ha moogaan fikirka; waxaa suurto gal ah sedex waxyaabood oo muhiim ah iibka, faa'iidooyinka, iyo iskaashiga. Seddexdan qodob ayaa ah waxyaabaha aad ugu baahan tahay inaad ku noolaato adduunka ganacsiga.
FullSEO waxay kaa caawin doontaa inaad isku qasdid dhammaan saddexda maado, taasoo ku siin doonta bilow bilow barwaaqo. Kooxaheenna khabiirada SEO waxay horumariyaan oo ay fuliyaan qorshe shaqsiyeed ee kobcinta mashiinka raadinta iyo kobcinta shabakadda oo si gaar ah loogu habeeyay baahiyahaaga ganacsi. Caawimaaddeena, boggaaga shirkaddu waxay qaadan doontaa oo keliya bogga ugu horreeya laakiin meesha ugu sarreysa ee raadinta dabiiciga ah ee Google. Markasta oo dadku ay u raadiyaan badeecad la mid ah waxa aad bixiso, waxaan u kaxayn doonnaa bartaada.
Ayaa ka faa'iida Semalt FullSEO?
In kasta oo xirmadayada noocan ah ee loo yaqaan 'FullSEO' inta badan loogu talagalay mashruucyada ganacsiga iyo ganacsiga e-commerce, waxay sidoo kale faa'iido u leedahay milkiilayaasha bilowga ah iyo websaydhada sidoo kale ganacsadayaasha doonaya inay sida ugu fiican uga helaan websaydhadooda.
Waxaan falanqeyn doonnaa shabakadahaada waxaanan ku geynnaa 10ka ugu sarreeya ee Google waqtiga ugu gaaban ee suuragalka ah. Adigoo isticmaalaya darajooyinka muhiimka ah ee Semalt iyo checkers, waxaad kusii socon doontaa isbeddel ahaan.
Waxaan bixinaa adeegyo sida:
Hubinta qiimeynta boggaaga
Ku furitaanka aragtida websaydhka ee shabakadda
Sahaminta websaydhyada tartamaya
Aqoonso khaladaadka kobcinta bogga
Hesho warbixinno heer caalami ah oo dhammaystiran.
Ma isku dayday inaad gaarto meesha ugu sarreysa, laakiin kaliya ma shaqeynayso? Bartilmaameedkaaga bartilmaameedka ahi kama helin shabakaddaada? Hel jawaabaha su'aalahan adoo u adeegsanaaya Falanqaynta iyo Baadhitaanka Shabakada Semalt ee bilaashka ah. Hubiyaha qiimeynta websaydhka ee khadka tooska ah wuxuu sidoo kale ku muujinayaa booska shabakadaada Google SERPs. Taas ka dib, waxaan soo jeedineynaa ereyo fure ah oo soo jiidan doona dhageystayaashaada bartilmaameedka ah. Soo ogow waxa dadku inta badan raadiyaan oo u sheeg waxay u baahan yihiin. Anaga oo la soconna tartankaaga, waxaan garan karnaa sirtooda guusha. Intaa ka dib, waxaan wax ka beddelnaa oo u adeegsannaa aqoontan cusub ee ku saabsan xayeysiintaada internetka.
Ugu dambeyntii, waxaan soo saareynaa warbixinno webka oo faahfaahsan waxaanna gacan ka geysaneynaa hagaajinta khaladaadka aan aragno. Annaga oo ah milkiileyaasha shabakadda, waxaan kaa caawinaynaa adiga iyo boggaaga inaad hodan noqotaan.
Ayaa ka faa'iidaysta Semalt Web Analytics?
Tan waxaan kugula talineynaa qof walba oo raba inuu si fiican uga faa iideysto websaydhyadooda. Maamuleyaasha websaydhada, milkiilayaasha meheradaha yaryar, shirkadaha, bilawga, iyo kuwa madaxa-bannaan ayaa waliba adeegsan kara adeeggan.
Waxaan u abuuraynaa shabakado cajiib ah warshado kasta iyo adeegsade kasta. Goobaha aan abuurnay waxay noqon karaan HQ dijital ah waxkasta oo khadka tooska ah ka kooban, laga bilaabo shirkadaha qadka tooska ah, ganacsiyada gaarka loo leeyahay, iyo dukaamada, ama istuudiyaha loogu talagalay hal abuurka, farshaxanada, dhamaan adeegsadayaasha kale ee leh fikradaha cajiibka ah ee ay u baahan yihiin inay ku helaan internetka. Waad isku halleyn kartaa adeegyadayada xirfadeed si aad u hesho dareenka aad u qalanto.
Muuqaalka websaydhkaagu wax badan ayuu ka sheegayaa badeecadaada. Soo jiidashada sawirada, midabada, iyo qaabeynta arrimaha sida ugu badan ee labiskaagu u yahay nolosha dhabta ah. Websaydhka rafcaanka leh wuxuu noqon karaa go'aaminta cidda joogi doonta daawashada waxa ku jira websaydhkaaga.
Barnaamijkeena kobcinta webka wuxuu bixiyaa:
Naqshadeyn soo jiidasho leh oo shaqeyneysa
Hirgelinta xalalka CMS
Isdhaxgalka jilicsan ee qalabka iyo API
Xoojinta ganacsiga E-commerce
Taageero iyo dayactir
Ayaa ka faa iidaya qorshaha horumarinta websaydhka Semalt?
Maamuleyaasha websaydhada, milkiilayaasha meheradaha yaryar, shirkadaha, bilawga, iyo kuwa madaxa-bannaan waa inay xor u ahaadaan inay tan ogaadaan.
Qaado waxyaabaha caadiga ah oo ka dhig kuwo aan caadi ahayn. Waxaan siinnaa fikradahaaga, noloshaada, dhaqdhaqaaqaaga, codkaaga iyo ficilkaaga.
Waxaan horumarinaa fikradahaaga
Adeegso daboollada codka aqoonyahannada ah
Kaliya ha u sheegin daawadayaasha waxaad soo bandhigto, tus. Si aad uga hor tartanto, waxaad u baahan tahay inaad ka fikirto meel ka baxsan sanduuqa. Samee wax aad uga weyn waxa uu xafiiltami karo. Caawimaaddeena, waxaad lahaan doontaa fiidiyowyo iskaashi oo aad u fiican kuwaas oo shaki la'aan ay ku farxi doonaan macaamiishaada mustaqbalka. Noosheeg fikradahaaga oo noo daawan si aan ugu baddalayno fiidiyooyin xayeysiis ah oo aad daabici karto si aad uga dhigto badhankaaga macaamiisha. Fiidiyowyadu waxay u sameeyaan qaab xiiso leh si ay ula xiriiraan adeegyadaaga. Waxaad tiraahdaa wax badan inbadan waqti gaaban oo ha u ogolaato inay xasuusiyaan astaantaada markay la wadaagaan fiidiyahaaga asxaabtooda. Waxaad ku raaxeysataa suuq geyn bilaash ah sababtoo ah fiidiyowyo sharaxaad oo tayo leh.
Maalin maalmaha ka mid ah, waxaa nagu dhacay in wixii ka caawiyay ganacsigeenna ay u shaqeyn karaan kuwa kale. Waxaan kaa caawinaynaa inaad abuurto astaan, oo waxaan ku kobcinno shabakadda. Waan ognahay inaan dhamaanteen jecel nahay inaan wax walba inta badan qabanno, laakiin shaqooyinka qaar waa in looga tagaa xirfadlayaasha. Aan kuu helno natiijooyin cajiib ah shaqadeenna. Khibrad sannado badan leh waxaad helaysaa gabal qumman oo keeg ah adiga oo aan la silcin caqabadihii aan kala kulannay hagaajinta cuntadeena. Waxaan si xirfad leh u dhisi doonnaa una horumarin doonnaa istaraatiijiyad ku saabsan xayeysiinta shabakadahaaga shabakadda.
Tani waa tan aan ugu magacdarnay adeegyada dijitaalka ah ee buuxa.
Macaamiisheenu had iyo jeer way qanacsan yihiin, waxayna ku wanaagsan yihiin inay nagala baxaan sheekooyin cajiib ah oo ku saabsan sida boggooda internetka, oo markii hore meel aan laga heli karin, ay hadda ku jiraan meelaha ugu sareeya. Haddaad jeceshahay inaad wax dheeraad ah aragto, kiisaskaas waxaa laga heli karaa halkan.
Semalt way u furan tahay qof walba, iyadoon loo eegayn luqadda aad ku hadasho. Maamulayaashayadu waxay kuu heli doonaan luqad caadi ah. Ka dib oo dhan, waxaan ku hadalnaa luqadaha waaweyn sida Ingiriiska, Faransiiska, Talyaani, Turkiga, iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxaan fahamsanahay gaarista gaaritaanka yoolalkaaga inay waxyar u muuqan karaan. Laakiin, annaga oo adeegsanayna, uma baahnid inaad culeyska kaligaa iska qaadatid. Khubaradeenna ayaa fududaynaya dhammaan howlahaas adag. Ugudambeyn, ujeedkeennu waa inaan hubino in kaliya oo aadan ku qanacsaneyn laakiin ay tahay in degelkaagu ugu sarreeyo.
Maxaad maanta noogu diiwaangelin weydo oo aad qayb ka noqoto kooxda hoggaamisa !!!